Jereo i Ibiza any ankoatry ny fety | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | España, Ibiza, Tsangatsangana
I Ibiza dia nosy iray malaza amin'ny azy fety fahavaratra, ny clubclub goavambe ary ny fiainam-piankohonana, fa ity nosy ity dia manome betsaka kokoa ho an'ireo izay tsy te hiaina izany fiainam-pifandraisana sy fandihizana izany mandra-maraina. Tsy isalasalana fa io no fadiranon'ity tontolon'ny hippie ity, izay tsy nitsahatra nitombo ny fizahan-tany hatramin'ny taona 60, ary tsy noho ny fety fotsiny izany, fa noho ny habaka voajanahariny, ny tantarany ary ny morontsirak'izy ireo.
Raha handeha ianao Ibiza fa te hahita zavatra any ankoatry ny alina ianao, afaka mahita ny zava-drehetra hita sy azo atao ao amin'ity nosy mahafinaritra any Mediterane ity. Maro no gaga amin'ny habetsaky ny toerana sy hetsika atolotry Ibiza raha mandeha manao vakansy any fahavaratra isika.
1 Tantara ao Dalt Vila
2 Tsena an-dalambe miaraka am-panahy hippie
3 Tsidiho ny Ses Salines Natural Park
4 Mandrosoa lalina ao amin'ny Can Marçà
5 Andramo ny SUP eny amoron-dranomasina
6 Filentehan'ny masoandro any Es Vedrà
Tantara ao Dalt Vila
Raha mankany Ibiza ianao dia saika voatery handany iray andro farafahakeliny ao anatin'ny faritra manan-tantara ao amin'ny tanànan'ny Ibiza. Tanàna tranainy voahodidina rindrina tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Any amin'ny faritra avaratry ny tanàna izy io, anjakan'ny panorama iray manontolo, noho izany ny fomba fijery avy amin'ny teboka sasany dia tsy azo resena. Ho fanampin'izay, betsaka ny zavatra azo atao ankoatry ny rindrina. Misy ny magazay kely mpanao asa tanana, trano fisakafoanana misy nahandro mahazatra, ary koa arabe kely rarivato mba ho very. Misy toerana tena mahaliana ihany koa azo jerena, toy ny Katedraly Virgen de las Nbers na ny Plaza de la Vila.
Tsena an-dalambe miaraka am-panahy hippie
Ao Ibiza dia misy tsena marobe manana toe-tsaina hippie, eny fa na dia amin'ny tanàna kely aza, fa ny malaza indrindra, ary ilay tokony halehantsika tsy isalasalana mba hahazoana io lamaody Ibiza adlib io dia ny Tsenan'i Las Dalias, izay atao isaky ny sabotsy, ary amin'ny fahavaratra dia atao ihany koa ny alahady, alatsinainy ary talata. Amin'ity tsena ity dia afaka mahita fivarotana hividianana akanjo mahazatra, kojakoja, emboka manitra, zavatra vita tanana ary koa fitaovana. Saingy tsy mijanona hatreo ny fahalianany, ary malaza be izany ka any amin'ny faritra misy fisehoana ary misy ihany koa ny trano fisakafoanana sy fisotroana hisakanana ny fiantsenana.
Tsidiho ny Ses Salines Natural Park
Raha fanananao ny natiora dia tsy isalasalana fa te-hitsidika an'io faritra arovana io ianao ao amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Betsaka ny isan'ny vorona, ary manana sanda ara-tontolo iainana lehibe, miaraka amin'ireo karazana endemika avy any amin'ny Nosy Balearic. Na dia tsy iray amin'ireo toerana fizahan-tany indrindra aza izy io, dia mahaliana tokoa ho an'ireo izay tia natiora na vorona.
Mandrosoa lalina ao amin'ny Can Marçà
Ireo lava-bato ireo dia manana mihoatra ny 100.000 XNUMX taona, izay voalaza tsy ho ela, ary noho izany antony izany dia manana lanja lehibe izy ireo. Any avaratry ny nosy any Sant Miquel izy ireo. Misy làlana mamakivaky azy amin'ny alàlan'ny sambo, mahavariana tanteraka, ary fomba iray handosirana vetivety amin'ny hafanana ivelany. Vondronà mpanondrana an-tsokosoko no nahitana azy, fa hatramin'ny taona 80 dia iray amin'ireo toerana fizahan-tany ao amin'ny nosy izy io. Ny fitsangatsanganana amin'ny hantsana ivelany hahatratra ny fidirana amin'ny lava-bato dia mahaliana ihany koa, noho izany dia traikefa tsara. Azonao atao ihany koa ny mitsidika ny lava-bato Ses Fontanelles, izay misy hosodoko lava. Ity toerana ity dia alefa avy any Cala Salada, mba hahitanao ireo sary hosodoko izay toa natao tamin'ny vanim-potoana varahina.
Andramo ny SUP eny amoron-dranomasina
Raha mitady fialamboly hafa ianao izay tsy misy fety rehefa tonga any Ibiza ianao, dia fanatanjahan-tena amin'ny rano no anao. Ny iray amin'ireo nanjary nalaza noho ny maha-tantara dia ny SUP na Stand Up Surf. Amin'ny morontsiraka maro dia afaka manofa fitaovana ianao handehanana amin'ireo takelaka lehibe ireo, ary misy aza ny fitsangantsanganana manodidina ny nosy, izay andro maromaro izay, hahalalana ny nosy amin'ny fomba fijery vaovao. Ny fanatanjahan-tena hafa dia snorkeling, antsitrika na kayak. Ny morontsiraka malaza indrindra dia manana toerana hahitana ny fitaovana hanaovana ireo fanatanjahan-tena ireo, noho izany dia fomba tsara filalaovana spaoro mandritra ny fialantsasatra izy ireo raha manandrana zava-baovao.
Filentehan'ny masoandro any Es Vedrà
Ny iray amin'ireo zavatra mahazatra indrindra tokony hatao rehefa milentika ny masoandro any Ibiza dia ny mitazona am-pitoniana ny filentehan'ny masoandro amin'ny faritra manokana. Izy ireo dia tsara tarehy tontolo iainana, ary fotoana manokana, izay azo iainana amin'ny lafiny maro amin'ny nosy, fa ny tsara indrindra dia ny fisian'ny vondron'olona hijerena miaraka amin'io fotoana majika io ho an'ny maro. Ny iray amin'ireo teboka malaza indrindra dia ilay manome Vedrà io, io nosy kely io, taonjato maro lasa izay, dia ampahany amin'ny nosy ary mitokana izao, saingy misy tantara sy angano maro momba an'io, satria voalaza fa manana hery manokana izy io, ka io no teboka tsara indrindra hijerena ny filentehan'ny masoandro. Masoandro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » Jereo i Ibiza any ankoatry ny fety